Sida loo doorto Adeeg Bixiye Email | Martech Zone
Toddobaadkan waxaan la kulmay shirkad ka fekeraysa inay ka tagto adeeg bixiyaha emaylka oo ay gudaha ku dhisto nidaamka emaylkooda. Haddaad toban sano ka hor i weydiin lahayd inay taasi tahay fikrad wanaagsan, anigu ma dhihi lahaa maya. Si kastaba ha noqotee, waqtiyadu way isbeddeleen, iyo tiknoolajiyada ESPs way fududahay in la hirgeliyo haddii aad ogtahay waxa aad qabanayso. Waa sababta aan u horumarinay CircuPress.
Maxaa Ku Bedelay Bixiyeyaasha Adeegga Emailka?
Isbeddelka ugu weyn ee ESP-yada wuxuu ku yimid samatabbixin. Xaqiiqdii maahan ESPs in la beddelay, waa ISPs. Email ugu dir xirfadlayaal gaarsiinta ESP-yada waaweyn ee loo isticmaali jiray inay xiriir toos ah la yeeshaan Bixiyeyaasha Adeegga Internetka si loo xalliyo loona hubiyo gudbinta wanaagsan. Waqti ka dib, in kastoo, ISPs ay xireen xafiisyadaas oo ay u weecdeen algorithms si ay ula socdaan sumcadda dirayaasha, u falanqeeyaan waxyaabaha, xayiraan ama u aqbalaan emaylka, uguna sii gudbiyaan faylalka SPAM ama sanduuqa.
Maskaxda ku hay in gaarsiinta aysan micnaheedu ahayn inaad gasho sanduuqa sanduuqa! 100% e-maylladaadu waxay aadi karaan Qashinka Junk, taasina waxay u dhigantaa 100% wax-qabad. Haddii aad isticmaaleyso ESP ama aadan isticmaalin kuma siineyso fursad ka wanaagsan oo aad ku gaarto sanduuqa haddii aad ogtahay waxaad sameyneyso. Waxaan isticmaalnaa 250ok si loola socdo meelaynta sanduuqaaga iyo sumcad.
Waxaa jira astaamo caqli badan oo ah Email Bixiyeyaasha Adeegga ku deeqo inaadan rabin inaad dib u horumariso gudaha, in kastoo. Waa inaad qiimeysaa qiimaha horumarinta qiimaha emaylka. Fikradayda shaqsiyadeed, markaad bilowdo dirida boqolaal kun oo emayl bishiiba, waxaad ubaahnaan kartaa inaad eegto horumarinta xalkaaga.
Speed - Haddii aad maalin kasta dirayso malaayiin emayl, adoo horumarinaya kaabayaasha shirkad sida Iibsiga iibka 'ExactTarget' waxay u badan tahay inaysan waligeed macno samaynayn. Waxay dami karaan balaayiin emayl iyagoon indhaha ka laaban.
Khabiir - Haddii aadan haysan shaqaale aqoon leh ama aad u baahan tahay wax badan oo gacan-qabasho ah iyada oo loo marayo abuurista iyo fulinta istaraatiijiyadaha suuqgeynta emailkaaga, gabi ahaanba ma doonaysid inaad dhisto xalkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la shaqeyso shirkad weyn sida Delivra kaasoo siiya adeeg macmiil cajiib ah.
Maareynta Bounce - Soo gudbinta emaylka uma sahlana sida dirista emaylka. Waxaa jira tobanaan ka mid ah sababaha emailada u soo boodaan waana inaad dhistaa oo aad maamushaa habraac lagu go'aaminayo inaad dib u dirto emaylka ama aad ka saarto cinwaanka emaylka.
SPAM U hogaansanaanta sharciga - Waxaa jira sharciyo kala duwan adduunka oo dhan kaas oo xukuma adeegsiga emaylka codsi ganacsi. Hubinta inaad adeecday waxay kaa badbaadin kartaa madax xanuun badan.
Design - Ma u baahan tahay wax horay loo sii sameeyey jawaab iimaylka emailka ama naqshadaha? Mise waxaad u baahan tahay naqshad jiidi oo hoos u dhig? Mise waxaad u baahan tahay nuxur sare iyo is-dhexgalinta qaabeynta ee emaylkaaga? Waxaad ubaahantahay inaad hubiso in ESP-gaagu leeyahay aaladaha iyo awoodaha aad ugubaahantahay inaad shaqsiyeeyo oo aad sifiican ugu dirto emaylka
Maamulka Macaamiisha - doorbidida mawduucyada, foomamka rukunka, iyo xarumaha ka-saarista ayaa fure u ah helitaanka iyo shakhsi ahaanta emaylka loogu talagalay macaamiisha.
API - Ma rabtaa inaad maamusho macaamiisha, liisaska, isku xirnaanta, iyo ololayaasha ka baxsan ESP? Awood adag API waa muhiim.
Isdhexgalka Xisbiga Saddexaad - Laga yaabee inaad rabto iskudhafka ka baxsan shelf ee nidaamka maareynta maadooyinkaaga (CircuPress ayaa tan ku leh WordPress), Madal Maareynta Xiriirka Macaamiisha, Barxadda E-Ganacsiga ama nidaam kale.
Warbixinta - Qiimaha guji-ilaa, A / B imtixaanka, haynta liiska, raadinta beddelka, iyo warbixinno kale oo adag oo si buuxda uga warbixiya cabirrada emaylka ayaa kaa caawin doona kordhinta qiimaha barnaamijka suuqgeynta iimaylkaaga. Hubso inaad falanqeyso oo aad isbarbar dhigto muuqaalada ESP kasta.
Dabcan, qiimaha waa furaha! Ma aragno farqi aad u weyn oo u dhexeeya astaamaha u dhexeeya inbadan oo ka mid ah bixiyeyaasha adeegga e-mayl ee ugu sarreeya suuqa marka loo eego kuwa yaryar ee loo yaqaan 'ESPs'. Haddii aad yareyn karto astaamaha kor ku xusan ee muhiimka u ah ururkaaga, markaa waxaan u maleynayaa in wax ku iibsiga qiimaha uu macno samaynayo. Hadana haddii aad dirayso malaayiin emayl, xitaa waxay macno u yeelan kartaa inaad la midowdo dhinac saddexaad sida Sendgrid, ama xitaa dhis nidaamkaaga.
Tags: 250okkaraa-spamcircupressemayl apimaamul boodboodka emailkanaqshadeynta emaylkakhibradda emailkaemail infographicisdhexgalka emaylkadir xawaaraha emaylkaadeegga emaylkaadeeg bixiyaha adeegga emaylkaemaylka u hoggaansamida spammaareynta macaamiisha macaamiishaemailkagaar ahaansida loo doortosharciga spammaaraynta macaamiisha
Ka taxaddar markaad is barbar dhigayso tufaaxa iyo geedaha tufaaxa